Gadziridzo gumi idzo Apple inofanirwa kuisa muIOS 12 | IPhone nhau
Kana iPhone X iri ramangwana, saka iOS ndiyo mota inotitora ku. Apple yazvino iPhone inoratidzira ese marudzi ese echidiki shanduko kuIOS iyo inogadzira kushomeka kwemusha bhatani uye kamera notch, asi kazhinji chikamu, iOS pa iPhone X haina kusiyana zvakanyanya pane iri pa iPhone 8.
Muchokwadi, kana iyo iPhone X ikatiratidza chero chinhu, ndeyekuti iOS iri kumashure zvishoma. Apple yaita zvakanaka kuivandudza nezviratidzo zvitsva nemifananidzo, asi ichienzaniswa neakatsetseka mac curves uye OLED kuratidza pane iyo iPhone X, iOS inotaridzika kushoma mazuva ano kupfuura nakare kose. Uye kana iyo iPhone X ichanyatsotungamira Apple mumakore gumi anotevera, ipapo iOS ichafanirwa kuve nhanho nhatu kumberi. Hezvino izvo Nzira gumi iOS 10 inogona kuita kuti bhora rikunguruke:
0.1 1. Nzira yakasviba
0.2 2.Wedzera chiyero cheFace ID
0.3 3. Mamwe mashandiro
0.4 4. Ngatitsvetei chero kupi kuti tivhure
1 5. Nguva dzose-inoratidzwa
1.1 6. Tora kaviri pahwindo kuti ubvise.
1.2 7. Isa maapplication mudhirowa
1.3 8. Kuvhura zvine hungwaru
1.4 9. Gadzirisa keyboard
1.5 10. Uyai nePadad-style multitasking
1. Nzira yakasviba
Iyo iPhone X ingave inonakidza neyechokwadi iOS yakasviba modhi. Sezvatinogona kuona paApple Watch, tema tema inotora mukana izere neOLED maficha, kusvibisa mitsara pakati pegirazi uye skrini, uye ichipa kunyepedzera kwechiso chisingaperi. Apple ingakurudzira iPhone X se "yakazara skrini," asi iine bezel rakakora gobvu. Tinogona kuzvienzanisa neiyo Invert Colors sarudzo mune yekuwanika marongero, asi yechokwadi nzira yakasviba muIOS yaizobvisa chinoonekwa chinodzivirira pakati pechidzitiro uye bezel woita kuti iratidzike senge wakabata chimedu chegirazi kubva kumucheto kusvika kumucheto.
2.Wedzera chiyero cheFace ID
Face ID inonakidza pa iPhone X, asi haina kukwana. Zvakawanda sekutanga kweTouch ID pane iyo iPhone 5s, Face ID iri basa riri kuenderera mberi uye Apple zvirokwazvo ichavandudza kukurumidza uye kuvimbika yeizvi pane maPhones emangwana.
3. Mamwe mashandiro
Zvakanaka, tichazvibvuma: kamera notch haina kushata sezvataifunga kuti zvingave. Kunyangwe ichiri kutaridzika kunge yakapusa mumifananidzo, mukuita hazvisi izvo zvinogumbura, uye mune dzakakodzera kesi, zvinotonhorera. Asi chinhu chimwe ndechechokwadi: haisi kuenda chero nguva munguva pfupi. Saka kana zvirizvo, tinoda Apple kuwedzera mamwe mashandiro ku nzvimbo dzakatenderedza notch, ichichinjisa chinzvimbo chebhaera munzvimbo yakanyatsopindirana inobvisa kudiwa kwekuvhura iyo Control Center kakawanda
4. Ngatitsvetei chero kupi kuti tivhure
Hapana mubvunzo kuti pane imwe nguva mune ramangwana maPhones edu anozongoerekana asvetukira kuchiratidziro chemumba nekukurumidza patinovatarisa, asi kusvikira zuva iro rasvika, isu tichiri kufanira kusimudzira kumusoro. Dambudziko nderekuti rinofanira kutsvedza kubva pasi yeiyo skrini kune chiratidzo chemba. Isu tinowanzo kanganwa, zvinoreva kuti isu tinofanirwa kuswipe kaviri kusunungura. SaApple akabvisa bhawa muIOS 7 uye ngatiregei kutsvedza chero kupi kusvika kukodhi yekodhi yekuwana, iko kugona kutsvaira kumusoro pakati pechidzitiro kunoponesa chaiko mazana emasekondi zuva rega rega.
5. Nguva dzose-inoratidzwa
Ikozvino iyo Apple painopedzisira yoshandisa OLED mune iPhone uye inogona kutora mukana wayo wesimba-yekuchengetedza mabhenefiti, iyo nguva yasvika yekugara-iratidzwa. A mureza zvigadzirwa zvigadzirwa Android kwemakore, chinhu chinoshamisa chinobatsira, kuratidza zvinhu senge nguva, bhatiri muzana, uye zviziviso, pasina kuda kuita zvinopfuura kungotarisa pafoni yako.
6. Tora kaviri pahwindo kuti ubvise.
Pasina bhatani repamba, iyo chete nzira yekuvhura iyo iPhone X skrini ndeyekutsikirira padivi simba bhatani, saka Apple yakatipa chiratidzo chinotonhorera: tapira kuti umuke. Asi inoshanda chete kana skrini yadzimwa. Kudzima skrini, isu tichiri kufanira kubaya bhatani remagetsi.
7. Isa maapplication mudhirowa
Ichokwadi kuti zvingave zvakanaka kana tikakwanisa kuviga maapplication edu mudhirowa muIOS 12. Isu tave kuvenga iyo icon network kwemakore, asi pa iPhone X iri mhosva chaiyo. Nechiedza chakajeka kudaro, tinoda ona yedu yese screen screen, asi Apple ichitimanikidza kuzadza skrini yedu nemifananidzo. Ino inguva yeApple kutipa sarudzo yekuvachengeta vakavanda sezvazvinoitika mudhirowa muApple, kuratidza iyo iPhone X skrini mukubwinya kwayo kwese.
8. Kuvhura zvine hungwaru
Tinogona kukakavadzana nezvakakodzera zveFace ID maringe neTouch ID zuva rese, asi chinonyanya kukosha ndechekuti isu hatifanire kuvhura mafoni edu nguva dzese dzatinoda kuishandisa. Pane mafoni eApple, unogona chengeta foni yako isina kukiyiwa kana yakabatana nemaWi-Fi network akavimbika kana kushandisa zvimwe zvigadzirwa zveBluetooth uye chimwe chinhu chakafanana chingave chinotyisa paIOS.
9. Gadzirisa keyboard
Iyo keypad paFoni X ine yakawanda nzvimbo yakatambiswa. iPhone X inogona kutipa yakawanda skrini yekushanda nayo, asi kana iwe uchinyora meseji kana email, chaizvo iwe hauna kuwana chero nzvimbo bhenefiti uchienzaniswa neiyo iPhone 8 Plus. Imhaka yekuti Apple yakasarudza kuisa iyo keyboard ine nzvimbo yakati wandei pazasi payo kuti isapindire nekukurumidza kwekumba. Yese pixel pane iyo iPhone X yakakosha, uye zvinonyadzisa kuva nenzvimbo chena yakawanda kudaro.
10. Uyai nePadad-style multitasking
iOS 10 yakaunza hunyanzvi hwekuita zvakawanda kuIpad, asi haichadi kuitirwa mapiritsi. Zvino iyo iyo iPhone X's screen inoyera angangoita matanhatu inches, isu tinofanirwa kukwanisa kumhanyisa maapplication maviri zvakanaka panguva imwe chete. Kana shandisa iyo PIP hwindo uye dhonza uye udonhedze. Iyo iPhone X's hofori skrini uye chiratidzo-chakavakirwa kufamba ichivhura iyo kumusoro kune zviuru zvezvakawanda zve multitasking mikana, uye iOS 12 inoda kuverengerwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » 12 kugadzirisa Apple inofanirwa kuita muIOS XNUMX
Nhamba yechinomwe inonzwika senge shit kwandiri. Ini ndinoda kuona kunyorera uye ndechimwe chezvinhu chandinofarira zvakanyanya nezve iyo iPhone. Ini ndinovenga iyo admin app dhirowa idanho risingabatsiri kuwana ako maapplication.
Pindura kuna davidnell
Ndokunge iwe usati wamboshandisa Android
Ndokunge iwe usati wamboshandisa Android xD
Apple Inotendera "Notch Remover" App ye iPhone X